Banto (vahoaka) - Wikipedia
Sarin-tany maneho ny faritra mampiasa ireo fiteny nizera-kôngô, ka isan'izany ireo fiteny banto (faritra miloko volon-tany).
Ny Banto dia vahoaka ao Afrika atsimon' i Sahara miteny amin' ny vondrom-piteny banto, izay ahitana fiteny miisa 450 any ho any. Monina hatrany Kamerona ka hatrany Kômôro sy hatrany Sodàna ka hatrany Afrika Atsimo izy ireo. Ny teny kikôngô hoe bantu dia midika hoe "olombelona".
Ireo vahoaka banto, izay vahoaka maro, dia manana rafi-piarahamonina sy rafitra ara-pôlitika samihafa, ka ny singa itambarany dia ny fampiasan' izy ireo fiteny banto. Araka an' i Joseph Greenberg, ny mpiteny banto dia niely nankany atsimo sy andrefan' i Afrika tany amin' ny 4 000 taona lasa izay, niala avy ao amin' ireo lembalemba avo ao Kamerona.
Ireo vahoaka miteny banto ao amin' ny faritra misy hivoka toy ny Kôngô (Kongo), ny Iaka (Yaka), ny Pende (Pende), ny Lele (Lele) ary ny Koba (Kuba), dia miaina anaty fianakaviana entin-dreny, ny sisa kosa miaina anaty fianakaviana entin-dray. Ireo miaina anaty fianakaviana entin-dreny dia matetika manao fambolena mandehandeha.
Ny lehibe indrindra amin' ireo vondrom-bahoaka banto dia ahitana mponina an-ketsiny, ohatra ny Sôna (Shona) ao Zimbaboe (12 000 000 tamin' ny taona 2000), ny Zolo (Zulu) ao Afrika Atsimo (12 000 000 tamin' ny taona 2005), ny Loba (Luba) ao amin' ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô (7 000 000 tamin' ny taona 2010), ny Sokona (Sukuna) ao Tanzania (9 000 000 tamin' ny taona 2016), ary ny Kikoio (Kikuyu) ao Kenia (8 000 000 tamin' ny taona 2019).
Fiteny banto[hanova | hanova ny fango]
Ny fiteny banto dia fianakaviam-piteny afrikana izay ahitana fiteny miisa 400 any ho any tenenin' ny olona ao amin' ny firenena manodidina ny roapolo ao amin' ny antsasany atsimon' i Afrika - izany hoe ao amin' ny tapany afovoany sy atsimo ary atsinanan' i Afrika. Zana-bodron' ny fianakaviam-piteny nijerô-kôngôley ny fianakaviam-piteny banto. Miisa any amin' ny 310 tapitrisa any ho any ny olona mampiasa ireo fiteny banto ireo. Isan' ny fiteny banto ireto fiteny tanisaina manaraka ireto:
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Banto_(vahoaka)&oldid=1038521"
Voaova farany tamin'ny 6 Oktobra 2021 amin'ny 13:52 ity pejy ity.